Ndị na-emepụta uwe ogologo na-eyi uwe ogologo - China Long Sleeve Shirts Loose & Factory
Nkeji aji uwe ojii na-acha odo odo slim Fit ọkara sutel uwe elu CM1102Z059000T4
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CM1102Z059000T4 Size S-3XL Key word waiter edo, uwe na-ele ọbịa, uwe elu ọkara, akwa elekere na-eji akwa 60/40 poly / owu GSM 143g Sewing string Polyester thread ana-akpọkwa ya eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion-resist…
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CW1056C155000H Size S-3XL Key word waitress edo, uwe ele ọbịa, uwe mwụda ogologo, akwa akwa akwa 100% POLY Sewing string Polyester thread ka a na-akpọkwa ike dị elu. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, na-eguzogide ...
Uwe mkpuchi uwe akwa uwe ojii na-acha odo odo uwe elu CW1102Z059000T4
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CW1102Z059000T4 Size S-3XL Key wordressress edo, uwe elekere, uwe mwụda ọkara, akwa uwe mgbanaka akwa 60/40 poly / owu GSM 143g Sewing string Polyester thread ka ana-akpọkwa ya eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo ihe mgbochi abrasion, shrinkage dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion-re ...
Polyester Cotton Classic Half Slimve Slim Fit waitress uniform Shirt CW1102Z104000T4
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CW1102Z104000T4 Size S-3XL Key wordressress edo, uwe elekere, uwe mwụda ọkara, akwa uwe mgbanaka akwa 60/40 poly / owu GSM 143g Sewing string Polyester thread ka ana-akpọkwa ya eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo ihe mgbochi abrasion, shrinkage dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion-r ...
Cotton Polyester Cotton Classic Long Sleeve waiter edo uwe elu CU1115C126000T6
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CU1115C126000T6 Size S-3XL Key word waiter edo, uwe ele ọbịa, uwe mwụda ogologo 100% owu Xinjiang Aksu akwa-ogologo, akwa na-enweghị ego, na-emebi emebi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka onye isi nri kootu. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abrasion resistanc…
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CW1056C154000H Size S-3XL Key word waitress edo, uwe ele ọbịa, uwe mwụda ogologo, akwa akwa akwa 100% POLY Sewing string Polyester thread ka ana-akpọkwa ya eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide, na-eguzogide ...
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CW167C0181E Size S-3XL Key word waitress edo, uwe ele ọbịa, uwe mwụda ogologo Uwe 65/35 poly / owu GSM.146g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, enweghị mkpuchi, enweghị mbibi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abra…
Wine RED Polyester Cotton Classic Long Sleeve Slim Fit uwe ime uwe elu Uwe CW167C0401E
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CW167C0401E Size S-3XL Key word waitress edo, uwe ele ọbịa, uwe mwụda ogologo Uwe 65/35 poly / owu GSM.146g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, enweghị mkpuchi, enweghị mbibi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abras ...
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CW181C0100E Size S-3XL Key word waitress edo, uwe ele ọbịa, uwe mwụda ogologo Uwe 65/35 poly / owu GSM.146g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, enweghị mkpuchi, enweghị mbibi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abras ...